na ku saabsan - Shanghai Hanjue Makiinado Co., Ltd
Shanghai Hanjue qiray Makiinado Co., Ltd. waa shirkad ku takhasustay cuntada mashiinada ku salaysan ee Shanghai, Shiinaha.
Iyada oo ku saleysan waxbarasho joogto ah iyo hal-abuurnimo, Shirkadda ayaa sameeyay tiro badan oo ah wax soo saarka oo tayo sare leh oo ku raaxaysan sharafta wanaagsan ka mid ah macaamiisheena daafaha dunida oo dhan. Our suuqyada waaweyn yihiin Bariga Dhexe, Koonfur-bari Eeshiya iyo America.
waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa lagu encrusting mashiinka, line-soo-saarka kibis, mashiinka cookies ka buuxsamay, line-soo-saarka cake moon, kibis & cajiin line-soo-saarka, line-soo-saarka cake, mashiinka cajiin, line-soo-saarka bolle caadka, iwm
Shirkadda Our ayaa ah koox farsamo oo xoog leh. Waxaan ku hay tallaabada la teknoolajiyada ee mashiinada cuntada caalamka horumarsan. Oo weliba waxaannu ku siin karaan naqshado iyo soo jeedinta khariidad si aad warshad. Waxaan leenahay design cusub oo sanad walba, aad soo dhaweeyay in ay diiradda on our Youtube, Facebook iyo Twitter: Hanjue Cuntada Makiinado.